အန်တီ ခိုင်ဇင်သက် ၏ Facebook မှ စာစုများ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
အန်တီ ခိုင်ဇင်သက် ၏ Facebook မှ စာစုများ
ဒီ နေ့ ညီ မ အ ရွယ် သူငယ် ချင်းတို့ အိမ်မှာ တရားသွား ထိုင် ပါတယ်။ ဘယ် အချိန် တရား မှတ် မှတ် နိမိတ် အလင်း ရောင် တွေမြင် နေရင် ကြည် နူး ကျေနပ် နေတာ လော ဘများ လား။ ကျွန်မ တို့ ဒီနေ့. တ ရား မှတ် လိုက် တ ရား အ ကြောင်း ပြောလိုက် မှာ သပိတ် အိုင် ဆရာတော်ကြီး အ ကြောင်း လေး ပြောမိ ကြ ပါ တယ်။ ဆရာတော် ကြီး မှာ သုံးနေကြ ဆေးကုန်နေလို့ လိုချင် မိတဲ့ အခါ နတ်က သိတော့ ရွာကလူကို အိပ်မက် ပေးပြီး လှူခိုင်း သတဲ့။ ဆရာတော် ကြီး က သိ တော့ လို ချင် စိတ် နဲ့ တောင့် တ မိ တာ နတ် တွေ သိ တာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်လို့ နောက် ဆို ဒါမျိူး ဖြစ် အောင် မနေဖို့ ဆုံးဖြတ် သတဲ့။ အရိယာ သူတော် ကောင်း ကြီး တွေက လိုအင် ဆန္ဒတွေ သည်မျှ ထိမ်းချူပ် နိုင်တာအားကျမိပါတယ်။
ကျွန်မ တို့က တော့ လိုချင် တောင့်တ မိတာ လေးများ ပြည့်ဝ သွား ရင် ငါ့ တရား တန်ခိုး ဆို ပီတိ တွေဖြစ် လိုက် ရတာ။ ငါ့လော ဘကို နတ်တွေ သိပြီ မရှက် မိခဲ့ ပါဘူး။ နိမိတ် အလင်း တွေ ရှိနေ တာ အပေါ်ပီတိ တွေ ဝေလို့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဆရာ ဇော်မိုးဟိန်း ကို ပြောပြ မိသေး။ ဆရာ က ပြောပြ ပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့ အဖိုးလေးက ကန္နီနည်းနဲ့ တရားအား ထုတ်ခဲ့ တာတဲ့။ ဆရာတို့ ကိုပြော ပြတယ်။ မင်းတို့ တွေ ရန်ကုန်ခေါ် လည်းမလာ နိုင် ပါဘူး ကွာဒါပေ မယ့် အဖိုး လေး က ရွှေတိဂုံ ဘုရား နေ့ တိုင်း ဖူး တာပါ ကွာတဲ့။
ဆရာတို့ က ငယ်သေး တော့ နား မလည် ဘူး တဲ့။ ခုမှ သိတာ အဖိုး လေးဟာ နိမိတ် အလင်းတွေ နဲ့ ရွှေတိဂုံ ဘုရားဖူး တာေန မွာတဲ့။ ကျွနိမ လည်း အမှန် အ တိုင်း ဝန်ခံရရင် နိမိတ် အလင်းတွေ နဲ့ ရွှေတိဂုံ ကျိုက် ထီး ရိုး ဘု ရား တွေ ကို ဖူး ချင် နေ သူ ပါ။ စာရေး ဆရာတစ် ယောက် မို့ အရာ ရာ စိတ်ကူး တွေပြည့် နေ သမျှ ခန္ဓာထဲ ကိုလည်း စပ်စပ် စုစု ထဲထဲ ဝင်ဝင် လျှောက် ကြည့် ချင် နေ သူပါ။
လက်ဖဝါး ထဲမှာ သွေးကြော တွေ တလိမ့်လိမ့် စီးနေသလို ဆိုလည်း ငြိမ် နေရင်း စိတ်ဝင်စား နေ ရတာ တွေ။ အာရုံ တွေရဲ့ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းရွှေ့ နေတတ် သောအကြောင်း တွေကို စိတ် ဝင်စား နေရင်း တရား အသိတွေ ကို လိုချင် ဇောတွေရှိတာဟာ ဆန္ဒလား? လောဘလား? ဘယ်သို့ဆိုဆို ကျွန်မ ခြေလှမ်းတွေ မရွေ့နိုင် တော့တဲ့ အချိန် အိပ်ယာ ဖျာကပ်လဲ လျောင်း ရင်း ကုန် ရမဲ့ အချိန် တွေ ရှိခဲ့ တဲ့ အချိန် ကျွန်မ စိတ်တွေ က. နိမိတ် တွေ နဲ့ ရွှေတိဂုံ ဘုရား ကျိုက်ထီး ရိုး ဘုရား တွေ သွားဖူး ချင်ပါ သေးတယ်။ ခန္ဓာပေး တဲ့ ဒုက္ခ တွေ ကို ဥပေက္ခာ လေးနဲ့ ကြည့် နိုင် ဖို့ဆို တာ သင်္ခါ ရုပက္ခာ ဉာဏ်လောက် ထိမှ မရောက်ရင် လွယ်ပါ့ မလား။ ခုချိန်မှာတော့ အတွေး တို့ရဲ့ ၉၀ရာနှုန်း ကတ ရားအတွေး တွေဆီမှာ ပဲရှိနေခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အန္တိမ အချိန် မှာ အကုသိုလ် တံခါးတို့ ကို ပိတ် ထား နိုင် ဖို့ တော့ နှစ် ၆၀ တောင် ဖြုန်း ခဲ့ ပြီး မှ ၄၅ ရက် မျှ မ သုံး နိုင် လို့ ဖြစ် မ လား လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးရင်း==============။
အန်တီ ခိုင်ဇင်သက် ( Facebook မှ ကူးယူ ဖော်ပြ ပါသည်။)
ခေါင်းအေးအေး စိတ်အထိုင် ကျကျ
Jan 25, 2021 Hein Zaw Oo
အန်တီ ခိုင်ဇင်သက် Facebook ပေါ်မှ စာဆုများ
#အာနာပါန သမထ ဝိပဿနာ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ စုံစုံ လင်လင်